5 sababood oo loo barto Darajada Cilmiga Bulshada | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 18/05/2021 08:00 | Tababar
El baraha bulshada Waa xirfadle shaqo aad u muhiim ah ka qabta magaalooyinka iyo magaalooyinka. Dadka oo dhami waa muhiim isdhexgalka shakhsiyaadkuna wuxuu xoojiyaa danta guud. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kooxo u nugul khatarta ah in ay la soo deristo nooc ka mid ah arag la'aanta heerka bulshada. Tusaale ahaan bulshada maanta jirta, dadka waayeelka ahi waxay la kulmaan da 'da' taas oo muujineysa cuqdad soo jiidaneysa sawir aan macquul aheyn oo waayeelka ah.
Baaruhu wuxuu ka qaybqaataa barnaamijyada dhiirrigeliya horumarka bulshada iyada oo loo marayo aadanaha. Tallaabooyinka la qaaday waxaa lagu macneeyn karaa baaxadda carruurnimada, qaan-gaarnimada, dhalinyarada ama gabowga. Waxaad sidoo kale taageeri kartaa kooxaha kale ee nugul. Maxaad u baranaysaa Degree-ga ee Barashada Bulshada? Tababarka iyo Daraasaadka waxaan ku siinaynaa xoogaa fikrado ah.
1 1. Noqo wakiilka isbeddelka
2 2. Qiimaha
3 3. Horumarinta nolosha dadka
4 4. Barasho joogto ah
5 5. Tallaabooyinka ka hortagga
1. Noqo wakiilka isbeddelka
Si kor loogu qaado isbeddelada qotada dheer ee bulshada, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiirrigeliyo hoggaanka mashaariicda lagu doonayo himiladan. Laakiin beddelidda astaamahani ma aha natiijada fursad, laakiin waxay ku dhalatay qorsheyn. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la diyaariyo ogaanshaha xaaladda hadda jirta si loogu dhaqaaqo jihada la doonayo. Baraha bulshada ayaa leh tababbarka lagama maarmaanka u ah inuu kaqeybqaato istiraatiijiyadan isbedelka.
Waxaa jira tiirar muhiim u ah kor u qaadida farxadda sida wanaagga bulshada. Qiyamku waa mabaadi'da hagaajiya wada noolaanshaha isla markaana xoojiya wadahadalka. Laakiin, isla waqtigaas, sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah inay jiraan xirfadlayaal kuwa kale ku tababbara muhiimada qiyamka, mararka qaarkood, dib loo soo celin karo. Qiyamyada difaaca xuquuqda aadanaha waa lama huraan.
3. Horumarinta nolosha dadka
Baraha bulshada wuxuu fiirinayaa sida, iyada oo loo marayo shaqada koox khaas ah, meel u jeesasho ku dhacda nolosha dadka hela ilaha cusub. Isbeddelku ma aha mid degdeg ah laakiin waxaa jira geeddi-socod isbeddel ah. Kaalmadani ma dhiirrigeliso ku tiirsanaanta laakiin waxay u tahay madax-bannaanida iyo awood-siinta dadka in, haysashada diyaar garaw fiican, ay wajahdo caqabado maalinle ah qalab cusub.
Qof kastaa waa gebi ahaanba mid gaar ah oo ka duwan, sidaa darteed, kala duwanaanshahani wuxuu kobciyaa nidaamka xirfadeed ee kuwa u arka in maalin kasta ay ka duwan tahay tii hore. Safarka baraha bulshada waligiis isku mid ma aha, maaddaama geeddi-socodka iyo duruufaha ay gaar yihiin.
4. Barasho joogto ah
Baraha bulshada wuxuu caawiyaa kuwa kale laakiin, isla mar ahaantaana, wuxuu si joogto ah wax uga bartaa xiriirka sheekooyinka tuso xaqiiqda adag. Baraha bulshada wuxuu wax ka bartaa awooda is-hagaajin ee kuwa uu weheliyo ee hago.
Dadka oo dhami ma laha xaalad wanaagsan, laakiin dhammaantood waxay u qalmaan inay faraxsan yihiin. Waana lagama maarmaan in la helo habka suurta gelinaya hawshan. Waxbarashada bulshada waxay jawaab ka bixisaa su'aalaha leh qiime falsafad muhiim ah.
5. Tallaabooyinka ka hortagga
Baraha bulshada waa xirfadle soo dhexgala marka xaalad nugul dhacdo. Ka qayb qaadashadiisa wuxuu ka dhigayaa dhinacan inuusan ku sii jiri doonin diyaaradda la arki karin: wuxuu cod siinayaa xaaladaha u baahan xalka la qabsiga baahiyaha gaarka ah. Laakiin baraha bulshada uma shaqeeyo si firfircoon, laakiin wuxuu u shaqeeyaa si firfircoon. In sidan, wuxuu kaloo kaqeybqaataa qorshooyinka kahortaga ee ujeedadoodu tahay xoojinta ladnaanta wadajirka ah. Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in laga fogaado ka-reebitaanka suurtagalka ah ee kooxaha qaar ee halista ugu sareysa ugu jira dhibaatadan sabab gaar ah.
Shaqada baraha bulshada waa mid aad muhiim ugu ah bulshada maanta jirta oo maraysa wakhti isbedel iyo dhibaato. Shaki la'aan, shaqadan xirfadeed ee aadka u saraysa waxay leedahay qiimo aadamnimo sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » 5 sababood oo loo barto Darajada Cilmiga Bulshada
Sidee loo gudbaa imtixaan aanad baran?